प्रचण्डलाई भेटेपछि ढुक्क भएका छौं : ठाकुर गैरे
Wednesday, 28 Nov, 2018 2:03 PM
१२ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा सचिवालय बैठकले एकीकरणको प्रक्रियालाई मूर्तरुप दिन नसक्दा नेता–कार्यकर्ता जिम्मेवारविहीन भएका छन् । लामो समयदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न सकेको छैन । सदस्यहरुको कार्यविभाजन हुन सकेको छैन । सचिवालयको निर्णय एकपक्षीय रुपमा थोपर्न नहुने र कार्यविभाजन चाँडो टुंग्याउन माग गर्दै नेकपाका झण्डै दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यले पार्टीसँग लिखित माग गरेका छन् । त्यसो त केन्द्रीय समितिको माग गर्नेहरुले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको उक्साहटमा ज्ञापनपत्र बुझाएको आरोप लगाइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने मध्येका एक केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भने यो आरोपको ठाडै अस्विकार गर्छन । न्यूज सेवासँगको कुराकानीमा उनले आफुहरुको मागलाई विषयान्तर गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् :
केन्द्रीय समिति बोलाउन माग गर्दै तपाईहरुले महासचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको थियो । ज्ञापनपत्रकै सन्दर्भमा मंगलबार अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेट्नुभयो । यस विषयमा उहाँको प्रतिक्रिया के थियो ?
हामीले ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्नुको कारण, त्यसको आवश्यकता, औचित्य र सन्दर्भका बारेमा भन्यौ । जुन ६ वटा मूल विषय उठाएका छौं त्यसका बारेमा अनुरोध गर्यौं । उहाँले तपाईहरुले जे विषय उठाउनुभएको छ ती पार्टीका महत्वपूर्ण ‘एजेन्डा’ हुन् र छलफल गरेर टुंग्याउन आवश्यक छ भन्नुभयो । सचिवालय बैठकमा हामी यिनै विषय वरिपरि रहेर छलफल गरिरहेका छौ । पार्टीलाई नीति र विधिसंगत ढंगले चलाउनुको विकल्प छैन । तपाईहरुले जे गर्नुभएको त्यसमा हामीले ध्यान दिन्छौं भन्नुभयो । छलफल गर्छौं र तपाईहरुको जुन ‘स्पिरिट’ छ त्यसरी नै पार्टी चलाउँछौं भनेर आश्वस्त तुल्याउनुभएको छ ।
तपाईहरुले उठाएका मुद्दाप्रति जसरी उहाँले प्रतिक्रिया र प्रतिबद्धता जनाउनुभयो त्यसमा अध्यक्ष दाहालको गाम्भिर्यता कत्तिको पाउनुभयो ?
अध्यक्ष प्रचण्ड हामीले उठाउँदै आएका पार्टीका सवालप्रति अत्यन्त चिन्तित र गम्भिर रहेको पायौं ।
अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले तपाईहरुलाई भेट्न नचाहिरहेको हो ?
उहाँसँग पनि हामीले समयको लागि अनुरोध गरिरहेका छौं र समय मिलाएर खबर गछौं भन्ने कुरा भएको छ ।
पार्टी अध्यक्षलाई नै भेटेर सबै कुरा राखिसकेपछि अब तपाईहरुले उठाएका विषयले प्राथमिकता पाउने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हामील के भनेका छौं भने यति ठूलो पार्टी विधि र पद्धतीसंगत ढंगले संचालन नगरेसम्म अगाडि बढ्न सक्दैन । अडाडि बढाउने प्रयत्न निरर्थक मात्र हुन्छ । त्यसैले हामीले पार्टीका नीति,सैद्धान्तिक,बैचारिक बिषयलाई पनि स्पस्ट गर्नु पर्यो । हामीले त स्वयम् पार्टीको विधानमा पार्टी संचालन पद्धतिको उल्लेख गरेका छौं । हामीले बनाएका विधिभित्र बस्नेबाहेकका कुरा हामीले खोजेको पनि हैन । त्यसमा नेताहरुलाई भेट्दा कसैको विमति पनि छैन । खाली कार्यान्वयमा जुन ढिलाई भएको छ त्यो ढिलाईको अन्त्य मात्रै खोजेको हो । सँगै हामीले के पनि भन्ने गरेका छौ भने पार्टीमा विधि र मापदण्ड बनाइएयो भने मात्र न्याय गर्न सकिन्छ । त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन्छ । त्यसैले यो विधि र पद्धतिअनुसार चल्ने, संस्थागत निर्णयबाट अघि बढ्ने, पार्टीलाई सिद्धान्तनिष्ठ बनाउने, आमकार्यकर्तालाई पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत उत्तरदात्विको परिस्थिति निर्माण गर्ने कुराले स्वयम नेताहरुलाई पनि सजिलो बनाउँछ र यसले पार्टीलाई गति दिन्छ भन्ने अनुरोध गरेका छौं । यसमा सबै नेताहरु सकारात्कम हुन जरुरी छ ।
पार्टी एकताको सम्पूर्ण काम सकिएको छैन । फेरिसचिवालय बैठक तारन्तारजसो बस्दै पनि आएको छ । तपाईहरुले अलिकति धैर्य किन राख्न नसकेको ?
केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजन र पोलिटब्यूरो गठन गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक आवश्यक पर्छ । त्यसैले हामी जिल्ला, प्रदेश र गाउँमा पार्टी, जनसंगठनको एकीकरणको प्रक्रिया नटुंगिएको । केन्दं्रीय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्यको कार्यविभाजन नभएको यो अवस्थामा हामीले प्रश्न उठाएको हो । अर्को, लामो समयसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्न नसकेकाले आजको सन्दर्भका राजनीतिक बैचारिक अभिमुखिकरण आवश्यक भएकाले हामीले बैठक बोलाउन माग गरेको हो ।
सचिवालय बैठकमा नेताहरु तीनतिर फर्किन्छन् । फेरि यही बेलामा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउँदा विवादहरु झन बढ्ने खतरा देखेर नेतृत्वले बैठक बोलाउन कतै विलम्ब पो गरिराख्या हो कि ?
केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउँदा त विवाद किन बढ्छ र ? सचिवालयले नेताहरुको बीचमा राम्रो छलफल गरेर स्थायी कमिटीमा आवश्यक निर्णय गरेर केन्द्रीय समितिमा जाँदा त्यो त सहज कुरा हो । असहज परिस्थिति त बैठकहरु नगर्दा, संस्थागत निर्णयको परिपाटी नबस्दा, पार्टी विधि–पद्धतिअनुसार नचल्दा पो हुन्छ । त्यसअनुसार चल्दा समस्या हुने कुरै भएन नि ।
त्यसो हो भने केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन किन ढिलाई भयो ?
हामीले आजसम्म के कारणले बैठक बस्न सकेन, त्यसमा को जिम्मेवार छ भन्ने विषय कोट्याउने भन्दा पनि यो एकीकरणको प्रक्रिया नटुंगिदा जुन अन्यौल उत्पन्न भएको छ । तल्लो तहमा जुन पार्टीविहिनताको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यो छिटो अन्त्य होस् भन्ने कुरामा हाम्रो जोड छ ।
पार्टी एकीकरण निकै सकसपूर्ण ढंगले अघि बढिरहेको छ । टुंगिन पर्ने विषय थुप्रै छन् । कहाँनिर समस्या देख्नुहुन्छ, केले अल्झायो ?
पार्टी एकताको घोषणाहुँदा तीन महिनाभित्र टुंग्याउने भनेर स्वयम् सचिवालयले निर्णय गरेको थियो । त्यसको प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरको भेलाको मिति समेत तोकेको थियो । तर, त्योअनुसार त सचिवालयले गर्न सकेन । किनभने सचिवालयले एउटा कार्यदल बनाएर कार्यदलमार्फत एकीकरण गर्ने बाटो लियो र त्यसअनुसार कार्यदलले तल गएर सायद सचिवालयको स्पिरिटअनुसार काम गर्न सकेनन् । त्यसले गर्दा समस्याहरु उत्पन्न भए । त्यसैले हामीले के भनेका छौ भने यो जिल्ला कमिटिहरुको एकीकरणका विषयमा एउटा मापदण्ड र विधि बनाएर जिल्ला कमिटिहरुलाई यो विधिभित्र बसेर आफै एकीकरण गर्नुहोस् भन्दा त्यो स्वतःस्फूर्त हुन्छ । एकाध जिल्ला र केही जनसंगठनबाहेक सबैमा अत्यन्त सजिलैगरी एक हप्ताभित्र एकीकरण हुने संभावना छ ।
एकीकरण प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा पार्टीलाई कस्तो क्षति भएको अनुभव गर्नुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले बुझेको आज स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार जुन बनाएका छौं । त्यसको संचालन र प्रभावकारितका लागि ति सरकारले जनपक्षिय काम गर्नका लागि त्यहाँ पार्टीको ‘सपोर्ट’को आवश्यकता छ । त्यहाँ पार्टी नै छैन । त्यसैले यो सरकारलाई सफल बनाउको लागि अथवा सरकारको तर्फबाट कतिपय ठाउँमा भएका देखिएका कमिकजोरीलाई हटाउन पार्टीको एकीकरण तत्काल गर्नु आवश्यक छ । त्यसमा ढिलाई गर्नु हुँदैन । यसले पारेको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भनेको एक त एकीकरण सम्पन्न नहुँदा तल को जिम्मेबार भएर पार्टीको पक्षमा कसले के काम गर्ने भन्ने कुरा नै यसले अबरुद्ध गर्यो । प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिकामा आज औपचारिकरुपमा पार्टी भेट्टाउन सक्दैनौं । एकीकरण नभएकैले आज माथि पनि कार्यविभाजन हुन सकिरहेको छैन । जनसंगठनहरु पनि सविककै हिसाबले चलिराखेको छ । त्यो पनि एक ठाउँमा आउन सकिरहेको छैन । यसले सबैलाई अन्यौलता सिर्जना गर्यो । मैले के गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा भएन । संगठनभित्र जुन सांगठनिक अन्यौलता र पार्टीविहिनता उत्पन्न भएको छ । जसको कारणले आमजनतामा पनि यसले अन्यौलता उत्पन्न गर्यो र क्रमशः निराशा पनि थप्दै गयो । बढ्दो निराशा र अन्यौललाई अन्त्य गर्नका लागि एकीकरण छिटो हुनु पर्यो भनेर हामीले आवाज उठाएको हो ।
माधवकुमार नेपालले उक्साएर तपाईहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएको भनिएको छ नि ?
यो विषय हामी कुनै नेतालाई सोधेर अथवा कुनै नेताको योजनामा आग्रहमा गरेको हैन । हामी यो ज्ञापनपत्र बुझाएको एक हप्तापछि स्वयम् माधव नेपाललाई समेत भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । अनुरोध गरेका छौं । हाम्रो मागका बारेमा अध्यक्ष दाहाललाई पनि भेटेर कुरा गरेका छौं । अन्य वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलाई पनि भनेका छौं । त्यसैले यो कसैको भनेर गरियो भन्ने टिप्पणी मैले पनि सुनें । त्यो भनेको एजेन्डामा प्रवेश गर्न नचाहने र यसलाई विषयान्तर गर्ने खोज्ने निहुँमात्र हो । यसले कुनै अर्थ राख्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले बेला बखत पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार पनि गरेनन् । विपक्षीले लगाएको आरोपको प्रतिवाद पनि गरेनन् भनेर गुनासो गरिरहनुभएको छ । तपाईहरुले सरकारको पक्षमा किन ‘लबिङ’ नगरेको ?
प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेजस्तै सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको बारेमा सिंगो पार्टी पंक्ति उभिनु पर्यो । पार्टीले त्यसको पक्षधरमा लिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नका लागि नै हामीले संस्थागत निर्णय, पार्टी र सरकारको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो बनाउने, माटोको भर ढुंगो, ढुंगोको भर माटो बनाउन खोजेको हो । नेकपाको नेतृत्वमा समाजवाद सम्भव छ । हामीले भनेको समाजवाद यो हो । चुनावअगाडि हामीले घोषणापत्रमा जुन प्रतिबद्धता गरेका छौं त्यो प्रतिबद्धता नेकपा नेतृत्वको सरकारले पूरा गर्छ, सम्भव छ भन्ने कुरा दृढतापूर्वक उभिएर देशभरका कार्यकर्ताले एक स्वर भएर भन्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि नै एकीकरणको पूर्णताको आवश्यकता भएको हो । संस्थागत, विधिसम्मत निर्णय प्रक्रियाको आवश्यकता भएको हो । सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको माग गरेको हो । यि सबै काम गर्न सकियो भने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको अपेक्षालाई पूरा गर्न सकिन्छ ।
निजी अस्पताललाई सर्वोच्चको आदेश : कोरोना सं‌क्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाऊ